Ungafundela ubuhlengikazi ukude? | Ukwakheka nezifundo
Ungafundela ubuhlengikazi ukude?
UMaite Nicuesa | | Iziqu
La ukuqeqeshwa ibanga kuvula iminyango emikhakheni eminingi yolwazi lapho abafundi benethuba lokufeza izinhloso zabo zokufunda esifundweni esithile. Ngaphakathi emkhakheni wezempilo, ubuhlengikazi nemithi izihloko ezibaluleke kakhulu, ngokwemvelo yazo, ezimema ukuqeqeshwa ubuso nobuso, nokuyinto efunwa kakhulu emayunivesithi.
Lesi ngesinye sezizathu esenza ukuthi, ezikhungweni ezihlinzeka ngoqeqesho lwamabanga, kungenzeki ukuthatha lolu qeqesho lobuhlengikazi. I- UNED Ngenye yamaphoyinti okubhekiselwa kuwo kulabo bafundi ababheka inketho yokufunda kude, noma kunjalo, lolu hlelo alufundiswa lapho.
Esinye sezikhungo ezibekwe kahle kakhulu ekufundiseni okuku-inthanethi yi- I-Universidad Internacional de La Rioja. Ubuhlengikazi abutholakali ekunikezelweni kokuqeqeshwa kwalesi sikhungo noma.
Lo msebenzi ungomunye wemisebenzi yezandla. Nayi eminye imibono yokuba ngumpetha ngokusebenza isikhathi sokutshala imali ekuqeqesheni.
1 Izifundo zabahlengikazi bebanga
2 Ukuqeqeshwa okuqhubekayo kwezobuhlengikazi
Izifundo zabahlengikazi bebanga
Kodwa-ke, ungathola izindlela ezifanele zokuthatha izifundo zebanga. Ngokwesibonelo, Ukwakheka kwe-Alcalá iyinkampani yezinsizakalo ezikhethekile kwezesayensi yezempilo nezenhlalo eyakhiwa ngabeluleki bezazi nabaluleki. Ngale webhusayithi ungafinyelela kukhathalogi yezifundo ngezihloko ezahlukahlukene zezifundo eziku-inthanethi.
Ngokusebenzisa injini yokusesha yaseUniversia ungafinyelela nakwigama ledatha leziphakamiso zokuqeqesha ngale ndaba. Izifundo ezingakusiza ekufundiseni kwakho ubuhlengikazi. I- ukuqeqeshwa okuqhubekayo Kungenye yezimpawu ezichaza labo bachwepheshe emkhakheni wezempilo abahlala belungiswa ngezinsizakusebenza ezintsha zolwazi eziqeqeshelwa ukwenza umsebenzi wansuku zonke.
Enye indlela yokubonisana engasebenza njengesithenjwa sokufinyelela kwizifundo zokuqeqeshelwa amabanga kwezobuhlengikazi ukuQeqesha I-Carpe Diem. Ungathola i-degree yakho ngezifundo ezivunyelwe nezisabekayo eziku-inthanethi kumabhodi emisebenzi.
Enye yezinzuzo zokuqeqeshwa ibanga ukuthi ikuvumela ukuthi uvumelanise umsebenzi wakho wobuchwepheshe nezifundo ezilandelayo ezihlose ukwandisa umkhakha wakho wolwazi ngokuthola amakhono amasha futhi imincintiswano ithiyori kanye nokusebenziseka. Inyanga kaSepthemba yiphuzu lesikhathi sonyaka lokuthi ngemuva kwekhefu lasehlobo kuphawula ukuqala komjikelezo omusha wokufeza izinhloso ezintsha nezinhloso zobungcweti.
Izifundo zokuqeqeshwa zikusiza ukuthi ube yinguqulo yakho engcono kakhulu ezingeni lobuchwepheshe. Vuliwe Dae ekilasini Ungafinyelela ukuqeqeshwa okukhethekile ngale ndaba. Konke ukuqeqeshwa kuvunywa yiKhomishini Kazwelonke Yokuqeqesha Eqhubekayo. Ngalesi sipulatifomu ungafundela ekhaya, ngesikhathi esifanele uhlelo lwakho.
Ukuqeqeshwa okuqhubekayo kwezobuhlengikazi
Ubuchwepheshe obusha buyimpahla eyengeziwe ekusizeni umfundi okuthi, ngezinsizakusebenza zobuchwepheshe, abe nethuba lokuvula iminyango emisha. Elinye lamapulatifomu lapho ungalandela khona okuqukethwe okulula kepha okuthakazelisayo Imeyili. Ipulatifomu yohlelo emfushane ongayilandela ekhaya.
Enye yezindlela ongabhala ngazo ku-ajenda yakho Umhlaba Wenhlanzeko ngeziphakamiso eziphendula izidingo ezifunwa kakhulu ngongoti emkhakheni.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuqeqeshela ukusebenza emkhakheni wabahlengikazi, ungazijabulela izinzuzo eziku-inthanethi ngokuthatha izifundo ezihambisanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Iziqu » Ungafundela ubuhlengikazi ukude?
URogelio Reyna Salinas kusho
Sawubona umbuzo wami, uma ungathola iziqu zobunesi, ukude? Ngiyabonga, ngiyinake impendulo yakho.
Phendula uRogelio Reyna Salinas
Ungaphepha kanjani kokwenzayo
Iminikelo yezifundo evela esikhungweni se-Aeronautical Studies